Kismaayo News » Magaalada Raaskaanbooni
Kn: Waa magac micno iyo miisaan siyaasadeed u samaynaya maanta guud ahaan dalka xili xaalada magaalada Kismaayo ay samaynayso ciwaano waaweyn oo saxaafada kusoo baxa.
Laakiin magaalada iska leh magacani iyo dadka ku noolba wax yar ayay kala socdaan waxa Kismaayo ka dhacaya, waa magaalo la daalaa dhacaysa nolol maalmeedka, warbixin kooban ayaan kaga hadlaynaa xaalada magaalada oo aan booqanay.
Waa magaalo yar oo 20kii sanno ee lasoo dhaafay noqotey xero ay ku tabobartaan dagaalyahadana xarakooyinka diiniga ah, waana halka ay ka dhalatay xarakada Raaskaanbooni ee aan maanta garanayno.
Xeryihii ciidamada lagu tabobari jirey sida ay qoriga u ridaan, miinooyinka u rakibaan, dagaalkana u galaan waxaa maanta ka dhisan iskool hoose dhexe oo ay dhigtaan boqolaal caruur ah, waa kii ugu horeeyey oo ay magaalada yeelato mudo dhow.
Dadka magaalada iyo maamulka iskoolka waxa ay mahada arrintani dusha u saarayaan Sheekh Maxamuud Fanax oo ah gudoomiyaha degmada Badhaadhe oo ay magaalada Raaskaanbooni hoos tagto, waxaa la sheegey in uu mushaar u qoondeeyey ku dhawaad 10 macalin oo iskoolkan dhigta.
Gudoomiyaha waxa uu arrintani kaga duwanyahay dhamaan mas;uuliyiinta maamulka KMG ah ee Jubbooyinka ka jira oo lagu eedeeyey in dhamaantood ay hanti uruursi ku jiraan, waxqabadna ay meel iska dhigeen.
Macalin Yuusuf waa maamulaha Iskoolka hoose dhexe ee Raaskaanbooni, waxa uu sheegey in baahi weyn ay iskoolka ka jirto “Iskuulka ma lahan musqulo, fasalo nagu filan ma heeysano, ardayda dhulka ayay fariistaan oo katiifad ayaa loo dhigaa, waa cadceed oo xitaa ma leh geed ay hergalaan caruurta, macalimiinta iyo maamulka ma lahan xafiis, waalidiinta cadceeda ayaan ku qaabilnaa, dhismaha hadda aan degenahay ma lahan iskoolka oo waxaa leh hey’ada Afrik” ayuu yiri maamulaha oo sidoo kale ah madaxa waxbarashada deegaanadaasi.
Dadka magaalada waa kaluumeysato, beeraleey, iyo raacato, waxaa ku yaala saldhig aad u shaqeeya oo ka samaysan geedo iyo kamoor.
Cabdulaahi Shareera waa taliyaha saldhiga, waxa uu sheegey in uu rajaynayo in la dhisi doono saldhig boolis, maxkamad iyo xafiisyada maamulka magaalada.
Magaalada waxaa gudoomiye ka ah mudane Cabdullaahi Diiriye, waxa uu maamulka xiriir wanaagsan la leeyahay maamulka Kenya ee magaalada Kayunga, halkaasi oo todobaadkii hal mar dadka magaalada inta warqado loo qoro ay gali karaan Kenya si danahooda oga soo dhamaystaan.
Waxaa kale oo jira iskaashi xaga amaanka ah, mar labo askari ay hub la goosteen, lana galeen Kenya, gudoomiyaha iyo ciidan uu wato ayaa hubkoodii la galay Kenya iyagoo baadi doobaya raga baxsaday.
Ilaha dhaqaale ee magaalada waxaa ka mid qaadka oo halkaasi ku dega, loona sii daabulo Kismaayo, waxaa qaadka keena baabuurta siiblayaasha oo Kaambooni looga yaqaano Kooyal, maalin kasta shan ayaa soo istaagta, waxaana daabula doonto dheereeya oo Kismaayo ku tagaya 2 saac gudahood.
Ku dhawaad boqol xamaali ayaa qaadka dejiya, kadibna rara, mararka qaar kareetooyin ayaa xeebta ka daabula marka ay baddu caariso oo doonyaha meel fog la dhigo, waxa ugu yaabka badan waxa ay tahay in xamaaliyaasha aysan lacag qaadanin, taasi badalkeedana la siiyo marduufyo jaad ah, markii aan weeydiiney sababta waxaa naloo sheegey “jaadka ayay sii iibsanayaan, isagaa oga lacag badan”.
Ciidamo aan badneyd oo dhiboow ku jira (tabobar) ayaa aroor kasta qorax sul iyo waabari u gaada ciyaara, qaarkood macawuusyo ayay xiranyihiin, kuwana waa feero qaawanyihiin, kuwa ayaan dacas xirneyn, sargaal dareeska xarakada raaskaanbooniyiinta xiran ayaa ku tabobaranaya meel dariiq ah oo u dhow xero ku taala halkii ay degenaan jireen agoontii Soomaali Galbeed.
Ma jirto sir la qarinayo iyo tabobar xasaasi ah, kuwa tabobaranaya xitaa waxay u egyihiin sidii dad iska ciyaaraya oo kale, gawaarida ciidanka Kenya ayaa hor iyo gadaal u maraya dariiqa.
Dadka magaalada inta badan waxa ay cunaan hilibka kaluunka, waxayna kasoo jeedaan qowmiyadda Baajuunta, sidaasi darteed haddii hal neef oo arri ah maalinkii la qalo, magaalada waa ku filantahay.
Magaalada waxaa si isku mid oga socota lacagta Soomaaliya iyo Kenya, ganacsiyada dhaqdhaqaaqa leh waxaa ka mid ah dukaamada lagu kaarikeeyo batariyada taleefonada maadaamaa aysan jirin koronto magaalada ku filan, dukaamada qaar waxa ay isticmaalaan tamarta cadceeda (Solar).
Xaga hormarka iyo tiknoolajiyada, waxaa jira hal maqaayad oo dhalo taleefishin ah oo diish leh ay ku xirantahay, habeenkii wararka ayaa laga daawadaa, dadkuna lacag ayay ka bixiyaan sidii shaneemadii.
Sidaasi oo ay tahay, bar kasta oo internet ah oo aad furto waxaa soo boodaya magaca magaalada, balse dadka magaalada ma ahan kuwa ka war haya hadalheynta weyn ee magaca magaaladooda.
Lama garanayo illaa heerka madaxda xarakada Raaskaanbooni ay xusuusanyihiin magaalada magaceeda iyo jiritaankeedaba ay ku caano maaleen.
Cabdinaasir Axmed Sh. Bashiir (Saxansoxo)